आयल निगमले ग्यासको मुनाफा बढी किन देखायो? कारण यस्तो छ | AbcSanchar.com
आयल निगमले ग्यासको मुनाफा बढी किन देखायो? कारण यस्तो छ
प्रकशित मिति : ८ असार २०७५, शुक्रबार १६:३५
उदयसिंह श्रेष्ठ, महेन्द्र सिंह/ ८ असार
नेपालगन्ज–बाँके जिल्ला स्थित ग्यास कम्पनीले प्रति सिलिण्डर रु. ५८ भन्दा बढी मुनाफा हुने गरेको नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालयले बताएको छ ।
नेपाल आयल निगमले यहाँस्थित भेरी ग्यास उद्योग र मनकामना ग्यास उद्योगलाई प्रति सिलिण्डर रु. १०५७/९६ मा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ग्यास आयात गर्ने क्रममा भन्सार लगायत भ्याट र बिमा खर्च निगमले व्यहोर्ने बताएको छ ।
यहाँस्थित दुई ग्यास उद्योगले रु. १०५७/९६ खरिद गरी डिलरलाई रु. १३०८/– मा बिक्री गरी प्रति सिलिण्डरबाट रु. २५०/०४ खुद नाफा गर्ने गरेको निगमले खुलासा गरेको छ ।
राँझास्थित नेपाल आयल निगमका प्रमुख विनित मणी पोखरेलले दिएको जानकारी अनुसार मासिक रुपमा यहाँस्थित भेरी ग्यासले १२०० मेट्रिक टन र मनकामना ग्यास उद्योगले ९३६ मेट्रिक टन ग्यास आयात गर्ने अनुमति अनुसार ग्यास सिलिण्डर बिक्री वितरण गरेका छन् ।
एक सिलिण्डर ग्यासमा कम्पनीले प्रति सिलिण्डर रु. २५०/०४ का दरले भेरी ग्यास उद्योगले मासिक रु. २ करोड १० लाख ३ हजार ३ सय ६० र वार्षिक रु. २५ करोड २० लाख ४० हजार ३ सय २० मुनाफा गरेको देखिएको छ भने त्यस्तै मनकामना ग्यास उद्योगले मासिक रु. १ करोड ६३ लाख ८२ हजार ६ सय २० पैसा ८० र वार्षिक रु. १९ करोड ६५ लाख ९१ हजार ४ सय ५० मुनाफा गर्ने गरेको पाइएको छ ।
भेरी ग्यासले करिब–करिब रु. २५ करोड र मनकामनाले रु. १९ करोड ६५ लाख आम्दानी अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा मुनाफामा करिब ३० प्रतिशत आयकर बुझाएको नदेखिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका एक कर्मचारीले आफ्नो नाम गोप्य राख्ने शर्तमा बताए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सामान्य नीति नियम अनुसार सरदर अनुसार आन्तरिक खर्चबाहेक भेरी ग्यासले रु. ३ करोड ७५ लाख खर्च कटाएर मोटामोटी रु. ६ करोड ३७ लाख ५० हजार र मनकामना ग्यासले ३ करोड खर्च कटाएर रु. ५ करोड आयकर बुझाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म त्यत्ति ठुलो रकम उक्त आयकर नबुझाएको बताइएको छ ।